NCHETA OGBUGBU NDỊ OGWU UNYI N’ỊVA NA 1949: IGWU UNYI BUTERE ANYỊ MBUZE N’ỌGHỌM- NDỊ NWE ALA – hoo!haa!!
Enugwu – Otu Ncheta Ndigbo (Centre for Memories) nọrọ n’ogige Sports Club, Enugwu ụnyahụ bụ abalị iri n’isii nke ọnwa Nọvemba, afọ 2019 were mee mmemme ncheta ndị ogwu inyi(coal miners) mmadụ iri abụọ n’otu tufuru ndụ ha maka ọgụ nnwere onwe ala Naịjiriya.
Ọdachi a dakwasịrị ndị ogwu unyi ahụ na-eme ngagharị iwe n’ụlọ ọrụ ha na ndagwurugwu Ịva, Enugwu maka ajọ ọnọdụ ọrụ nakwa mkpagbu ha na-anata n’aka ndị ọcha na-achị ala anyị oge ahụ mere ka ọgụ nnwere onwe Naịjiriya n’aka ndị Briteenụ birizia ọkụ.
N’okwu ya n’oge ahụ, Ikenga Dons Agụ, onye Akama Ngwo, obodo so n’ebe e gwuru unyi kọwara udiri ahụhụ ndị be ha na-agabiga maka nkea
“Anyị bụ ndị e gwuru unyi na be anyị nọ n’oke nsogbu ugbua. Anogide ala e zéé. Ndị mmadụ che na ọ bụ mbuze. Ọ bụghị mbuze, ohere juru n’okpuru ala na be anyị, ebe e siri gwuo unyi.
” Ndị be anyị anaghị akọnwuzi ọrụ ugbo. Ị gaa Enugwu Ngwo, ị ga-ahụ ụlọ elu dị nkwago abụọ nọgidere zekpuo n’ime olulu. Site Abọ ruo Eke, ma Nsude, ma Akegbe Ugwu, otu ihe ahụ na-ebe n’obodo nile e gwuru unyi”
Ọ kọwakwara na o nwebeghi ihe Gọọmenti mere iji zọpụta ha n’ajọ ọnọdụ ahụ, ma nke Etiti ma nke Steeti.
“Gọọmenti e nwebeghi aka ha nyere anyị. O wutere m na Hon. Edeọga, Onye nọchitere anya Gọvanọ Enugwu Steeti anọghị iji nụ ihe m na-ekwu”.
Na mbụ, n’okwu ya, Hon Chijioke Edeọga, Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu n’Enugwu Steeti, onye nọchitere anya Gọvanọ Enugwu Steeti kwuru na mmemme ahụ bụ ohere Ndigbo iji chemie echiche maka ọnọdụ ha n’ala Naịjiriya.
Edeọga kwukwara na ndị ntorobịa ugbua enweghịzị obi ịlụ ọgụ megide mkpagbu dịka ndị ogwu unyi ahụ siri mee.
Kaosiladi, otu onye ntorobịa, Ifeanyị Nwankwọ kwuru na ya bụ kọmishọna ekwuteghi ya
“Ọ na-asị na anyị akaghị obi, ọ chọrọ ka anyị mee ngagharị iwe ka a tụọ anyị tear has, gbaa anyị egbe? Iwe dịkwa n’obodo, onye a kpakwala nwa agụ aka n’ọdụ” .
Ihe ndị e megasịrị ụbọchị ahụ gụnyere abụ, okwu ncheta, ejije wdg.
Otu ejije ‘Happy Family Theatre’ gosiri ejije nke a kpọrọ ‘Ncheta’ banyere mwakpo nakwa ogbugbu ndị ogwu inyi ahụ.
Ndị otu ejije Happy Family Theatre
Mazị Greg Ọdịakosa, onye nlekọta otu ejije ahụ kwuru na ha ga-enwe Ngosipụta Ejije ha ọzọ n’uju n’ọnwa Disemba afọ a.
Ụmụ akwụkwọ Sekọndịrị bịara mmemme ahụ
Ụmụ akwụkwọ si ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị dị iche iche bịara ya bụ mmemme gụnyere ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị ụmụ agbọghọ Osisatech, Enugwu, Ụlọ akwụkwọ ụmụ agbọghọ Lady Ibiam, Enugwu
Previous Post: WỌRỊ: NDỊ UWE OJII EJIRILA EGBE NAPỤ NWATA AKWỤKWỌ EGO ỤGWỌ AKWỤKWỌ YA
Next Post: NDỊ AKPỤ OBI MERE NHỌPỤTA NA BAYELSA STEETI -MMA ODI